अनुहारको दाग-धब्बाले लज्जित हुनु परेको छ?घरमै बसी सजिलैसंग यसरी हटाउनुहोस् – Dailny NpNews
प्रकाशित मिति: मंगलबार, फाल्गुण २५, २०७७ समय: २२:१२:४५
काठमाडौँ / सुन्दर तथा आर्कषक अनुहार कसको राजाईमा नपर्ला र ? अनुहारमा आएको दाग धब्बाका कारण हामी मध्ये धेरै जना लज्जित हुनु परेको होला।दाग धब्बा हटाउनका लागि बिभिन्न महंगो केमीकल युक्त शौन्दर्य सामाग्रीको प्रयोग पनि गरिरहेका छौँ होला। तर यस्ता सामाग्रीको प्रयोगले अनुहारको शुन्दरता बढ्नुको साटो झनै हराएर जाने गर्दछ।हामी यहाँ यस्तो घरेलु बिधिका बारेमा चर्चा गर्दैछौँ । जसको प्रयोग एक दिन बिराएर लगातार एक महिना सम्म गर्दा अनुहारको दाग धब्बा हटाई चम्कीलो बन्न सहयोगी हुनेछ। आउनुहोस् जानौँ के हो त्यो उपाय ?
३) आलु र गोलभेंडा:काँचो आलुलाई ताछेर पिस्ने पिसिएको आलुमा पाकेको गोलभेंडाको रस निचोरेर पेष्ट बनाउने अनि माथि बताइृएअनुसार अनुहार भरी लगाएर २५ मिनेट छाड्ने र चिसो पानिले मुख धुने। गोलभेंडाको अमिलोले दाग हटाउन तथा चमक ल्याउन महत्व राख्छ।